विद्यासुन्दरको भव्य घरदैलो अभियान,एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली – Maitri News
विद्यासुन्दरको भव्य घरदैलो अभियान,एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आम निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दावी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले बहुमतको सरकार बनाएपछि एमालेले राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको नमूना प्रर्दशन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रलाई लगनटोलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले मात्रै मुलुकलाई निर्माण गर्ने भएकाले जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि साथ दिने बताउनुभयो ।अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘काँग्रेसका वृद्धबृद्धाहरुले पनि एमालेमा भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । बुढेसकालमा वृद्धवृद्धाहरुलाई साथ दिने पार्टी एमाले मात्रै भएकाले पनि एमालेप्रतिको विश्वाश बढेको छ । ’ काँग्रेसलाई काम नलाग्ने पार्टीको संज्ञा दिदै ओ्लीले काँग्रेसले सरकार चलाउँदा देशमा लुट मात्रै मच्चाएको बताउँदै भन्नुभयो, काँग्रेसले छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज जस्ता स्वदेशी उद्योग धन्दा बचेर खायो ।’
अध्यक्ष ओलीले तुफानी बेगका साथ निर्वाचन अभियानमा जुटन पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि निर्देशन दिनुभयो ।
घरदैलो अभियानमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो,
बाटाघाटा फराकिला पार्नुछ , बिजुली कहिल्यै नजाने बनाउनु छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ बनाउनु पर्नेछ । आफ्नो ठाउँको विकासका लागि आफैं योजना बनाएर स्वाबलम्बी बाटो हिंड्नु छ । यी सबै काम गर्न ख्याल ख्याल गरेर हुँदैन । अत्यन्तै जिम्मेवार, दृष्टिकोण भएको, काम गर्न सक्ने ब्यक्तिको आवश्यकता छ । जसले काम गर्न सकोस् । त्यसैले हामीले यहाँ अत्यन्तै लोकप्रिय, पहिले नै जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गरेर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएका मेयरको हैसियतमा हामीले अघि सारेका छौं र उहाँलाई यहाँको विकासको अभिभारा सुम्पंदैछौं ।
विद्यासुन्दर शाक्यले भ्रष्टाचार गर्नुहुने छैन, स्वच्छताका साथ आफ्नो काम गर्नुहुनेछ । देश विकासको गतिलाई महानगरको तर्फबाट नमुनाको रुपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ । पुरानो सहर हो यस सहरलाई नमुनाको रुपमा अगाडि बढाउन सजिलो छैन । यो सहरको आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । चानचुने कुरा होइन जोकसैले सक्दैन । त्यसैले एमालेले विद्यासुन्दर शाक्यजस्तो सक्षम ब्यक्तिलाई मेयरका रुपमा अगिाडि सारेको छ । हाम्रा उम्मेदवारहरु हेर्दै तपाईंहरुले थाहा पाउनुहुन्छ, काम गर्ने खालका हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ । हामी देश बनाउने अभियानमा छौं, संकल्पमा छौं । राष्ट्र बचाउने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानलाई साथ दिन एमालेलाई जिताउनु पर्छ । अव देश एमालेमय हुन्छ, सूर्यमय हुन्छ । आज यहाँ सानुराजा शाक्य आउनु भयो, यो बुझेर आउनु भो । आउनुहोस् तपाईंहरु पनि देश समृद्ध बनाउने अभियानमा सहभागि हुनुहोस् ।
पार्टी मात्रै भनेर के गर्ने, यहाँ पार्टी त कस्ता कस्ता छन् तपाईंहरुले देख्नु भएकै छ । खेलाँची नगरौं, यो महानगर बनाउने बेला हो, देश बनाउने बेला हो । आफ्नो देश बनाउनका लागि आफ्ना सन्तानको भविश्य उज्वल बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासका र अरु सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि एमालेलाई अगाडि बढाउँ । अरु पार्टीमा भएका साथीहरुलाई सम्झाउनु पर्छ, आफ्नो देशको महानगरको विकासको बाटोमा आउन दिने पहल गर्नु पर्छ ।
चुनावको यो माहौलामा एमालेको कुनै पनि कार्यकर्ता चित्त बुझेन भनेर टिकाटिप्प्णी गर्ने छैन । उम्मेदवार एउटा मात्र बनाउन सकिन्छ । धेरै बनाउन त सकिंदैन । यो बुझ्नु पर्छ । भ्रम फिंजाउँने नै खेती गरेर बसेका मान्छे छन् यहाँ । कतिले भ्रम फिजाउँनकै लागि अनलाईन खोलेर बसेका छन् । एमालेप्रति जनता अलमलमा परुन् भनेर, एमालेलाई नचिनुन्, एमालेलाई नबुझुन्, एमालेका संकल्प थाहा नपाउन् भनेर बसेका छन् । उनीहरुको काम नै भ्रम सिर्जना गर्ने हो । आफ्ना अपराध लुकाउने, एमालेका असल कामलाई छोप्ने उनीहरुको खेती नै हो । यस्ता भ्रम चिर्न अव एमालेको कुनै पनि शुभेच्छुक अल्छी गरेर घर बस्नु हुँदैन । सूर्यजस्तै महानगर, उज्यालो महानगर, विद्या भएको महानगर, सुन्दर महानगर बनाउन तपाईंहरुले के गर्ने हो जुट्नुस् ।
काठमाडौं कसरी बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता पत्रमा स्पष्ट योजनाहरु छन् । कसरी महानगरलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना यहाँ छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई एमाले छ, युवाहरुलाई एमाले छ, किशोर किशोरी, वालवालिकाहरुलाई एमाले छ । एमाले बाहेक जनताका लागि कसैले केही गरे रु कांग्रेसको झण्डा राखेका घरमा घरमा गएर पनि यो कुरा बुझाउनुस् । जनतालाई भ्रममा पारिएको छ । एमालेलाई चिन्न दिइएको छैन । तपाईंहरु यो बुझाइदिनुस् । यो देशमा औद्योगिकरण कसले गर्छ, यहाँ रोजगारीको सिर्जना कसले गर्छ ? देशको सुरक्षा कसले गर्छ ? राष्ट्रियताको संरक्षण कसले गर्छ ? एमाले बाहेक कोही छैन । देशको कुरा गर्यो भने नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेहरु छन् यहाँ । कानुन मान्नु पर्छ भन्यो भने हामीले दिएको आदेश नमान्ने भनेर महाभियोग लगाउने छन् यहाँ । मैले ललितपुरको हिजोको कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँको विकासका बारे बोलेको थिएँ । तर, यहाँ केही पेड पत्रकार पनि छन् । उनीहरुले त्यो कुनै कुरा सुनेनछन् । कांग्रेसलाई गाली गलौज गरेर सारा समय लागी गलौज गर्यो भनेर लेखेछन् । माओवादीको त मैले नाम लिनै पर्दैन, किन लिने भूतपूर्व माओवादीको नाम ।
सवैलाई थाहा छ कांग्रेस काम लाग्दैन । ०४८ सालमा बहुमत ल्यायो, बाँदरका हातमा नरिवल खेलाउँदै लगेर ५१ सालमा परतिर फाल्दियो । हामीले अलिकति सरकार सञ्चालन गर्यौं, उधुम भयो देशमा, विकासको लहर चल्यो, आत्तिए सबै । धेरै टाढा जानु पर्दैन । हामीले अस्ती नौ महिना सरकार चलायौं । नौ महिना सरकार चलाउँदा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको सुधार्यौं, नाकाबन्दी खुल्यो, आन्दोलन समाप्त भयो, मान्छे मारिएका थिए, त्यो अवस्था अन्त्य भयो । तनाव खतम भयो, चीनसँगको पनि ब्यापारका लागि हामीले बन्दगाह, पारवहन, यातायातका बाटाहरु खोल्यौं । पूर्वपश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेल, काठमाडौं पोखरा रेल, काठमाडौंमा मेट्रो, चक्रपथको विस्तार, बाहिरी चक्रपथको विस्तार, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने यी सबै काम हामीले ल्यायौं । खानीहरु पत्ता लगायौं पेट्रोल पत्ता लगायौं । नौ महिनामै के के हुनथाल्यो भनेर यिनीहरु आत्तिए । के भनिरहनु यिनीहरुलाई अव कात्तिक मंसिरसम्म पर्ख, हामी भन्न चाहन्छौं । आम निर्वाचन त होस् । एमालेले एकपल्ट बहुमत ल्याएपछि देखाउँछ, देश कसरी बनाउनु पर्छ ।
कांग्रेसको बारेमा केही भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली हानेर बालकलाई मारेको यही असनमा होइन ? किन बालकलाई मारियो भनेर प्रश्न गर्दा गोलीको आँखा हुँदैन भनेर धतंगा जवाफ दिने कांग्रेस होइन ? शान्तिपूर्ण जुलुशमा गोली चलाउने, सयौं मान्छे मार्ने कांग्रेस होइन ? बहुमत आए पनि विकासको थोपो नगर्ने, राज्यको ढुकुटी मासेर खाने, राज्यको सम्पत्ती बेचेर खाने कांग्रेस होइन ? कांग्रेसले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेचेर नखाएको भए आज तपाईं हाम्रा खुट्टामा विदेशी जुत्ता हुँदैनथे, आफ्नै देशका जुत्ता हुन्थे । सार्वजनिक सम्पत्ती कति बेचेर खाइदियो ? भृकुटी कागज कारखाना नबेचेको भए, हामीले विदेशी कागजमा छाप्नु पर्ने थिएन । कागज कारखाना बेचेर खाइदियो । कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सम्पत्ती जे पनि देख्नै नहुने । देश भित्रको देख्नै नहुने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता देख्नै नसक्ने । त्यस्तो कांग्रेसलाई मैले केही भनिरहनु पर्छ रु कांग्रेसको विरोध गर्यो भन्छन् । किन विरोध गर्नु रु कांग्रेस काम लाग्दैन मात्रै भनेको हुँ । सबैलाई थाहा छ, मैले किन विरोध गर्नु परेको छ । एमालेले आफ्ना निम्ति होइन देशका निम्ति काम गर्छ, आफन्तका निम्ति होइन जनताका निम्ति काम गर्छ । यहाँ म आएको छु, दाइ जिताउन, छोरी जिताउन वा ज्वाईं जिताउन होइन । देश जिताउन आएको छु, जनताको छोरो जिताउन, जनप्रतिनिधि जिताउन आएको छु । हामी जनता जिताउने संकल्प गरिरहेका छौं ।
कार्यक्रममा एमालेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार विद्या सुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकालाई समृद्ध र सुन्दर सहर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं महानरमा मेयरका एमाले उम्मेदवार शाक्यको चुनावी घरदैलो कार्यक्रम आज लागि लगनटोलमा तोकिएको थियो । घरदैलोमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आउने खवरपछि स्थानीवासीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
एमालेका अन्य नेताहरु लगनटोल डबलीमा उपस्थित भइरहेका थिए सँगसँगै मेयरका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य र महानगरका पूर्वमेयर केशब स्थापित पनि । त्यसैबेला ओली आइपुगेपछि भीडमा उपस्थित सबैले परर ताली बजाए, स्थानीय नेवारी संस्कृति झल्काउने पहिरन र धिमे बाजाको बेग्लै रौनक थियो । मतदाताको घरदैलोमा ओली पनि जाने थाहा पाएपछि अन्य दलका समर्थकको पनि त्यहाँ उपस्थिति देखिएको थियो ।
ओली घरदैलो अभियानमा मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यसँगै हिंड्नुभयो । जव ओली घरदैलोमा हिंडिरहँदा अन्य पार्टीको चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा गाडेका घरबाट पनि सर्वसाधारणहरु सडकमा ओर्लिन थाले । ओलीको काम गर्ने तरिका हामीलाई मन परेको छ । हामी नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने भए पनि यसपटकको चुनावमा एमालेलाई सहयोग गर्छौ’ स्थानीय चिरी महर्जनले भन्नुभयो, ‘पहिले देखि नै कांग्रेसमा लाग्दै आएकाले आस्थाको सम्मान गर्न मात्र कांग्रेसको झण्डा राखेको हो ।’ रुख चिन्हको झण्डा राखिएका घरबाट पनि मतदाताले तल झरेर ओली सहित एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई स्वागत गरेका थिए । तल नझरेकाहरुले झ्यालझ्यालबाट हात हल्लाउँदै स्वागत गरेका थिए ।
घरदैलो कार्यक्रम भनिए पनि त्यसले र्यालीको रुप लिएको थियो । सो घरदैलो कार्यक्रम महानगरका वडा १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७ मा भएको थियो । कार्यक्रममा नेताहरु जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्व मेयर केशव स्थापित, युवा नेता बसन्त मानन्धर लगायतका स्थानीय नेताहरुको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो । एमाले उपाध्यक्ष एवं ३ नं। प्रदेश संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य, पार्टी सचिव प्रदिप ज्ञवाली, बिष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल लगायतका नेताहरुको कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।
वैशाख २५ गते ।